ZTE mara ọkwa na nubia Z11 nwere 5,5 na 6GB nke ihuenyo RAM | Gam akporosis
ZTE nubia Z11 mara ọkwa na 5,5 ″ 1080p ihuenyo, Snapdragon 820 mgbawa na 6GB nke RAM
Anyị enweworị ọdụ ọzọ na-abịa na a 6GB Ram olile anya na ogaghi eme dị ka OnePlus 3 na na njikwa nke RAM nwere ibipụta ụfọdụ faịlụ ka ndị ọrụ wee nwee ike ịmepụta omenala ROM nke ga-eji ohere gigabytes niile. Nke a na - eme n'ihi na iji RAM niile, ngwaọrụ ahụ na - eri oke batrị, nke anaghị anabata iji nweta ahụmịhe nke iji ụbọchị. Agbanyeghị, n'ezie ụfọdụ Mmepụta ga-enwe ike gbagote na ha ka ha mma oriri ma si otú na-enye ihe na-akpali ROM.
Ugbu a ọ bụ ZTE na kwa ọ na-aga 6GB RAM dị ka nnukwu nkwupụta maka ndị na-azụ ahịa na nubia Z11, ama ama ya na profaịlụ ngwaike dị ukwuu na nke egosiri dị ka usoro kachasị mma. Ihe ejiri mara ya bu ihe ngosi 5,5-inch nke nwere 1080D nke nwere 2.5D curved panel nke na eti aka ya rue pesenti iri ato na asatọ nke onu ogugu nke onu ogugu. Ọ bụ ihe ọzọ nke ọnụ nwere Snapdragon 81 mgbawa, na-arụ ọrụ na nubia UI 820 (Android 4.0 Marshmallow) na nwere a 6.0 megapixel n'azụ igwefoto na sọrọ-ụda Ikanam flash.
ZTE gosipụtara ekwentị na-adịghị njọ ma ọlị ma na-agbaso ụdị eriri ahụ niile ha na-erute na ọnụego mgbanwe Iji nwaa ndị ọrụ ahụ lere ọnụahịa nke taa anya nke ọma, na-amara na enwere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nwere ike ị nweta ọmarịcha ahụmịhe onye ọrụ ma ọ bụrụ na ha maara etu esi azụta ọgụgụ isi.
Ma nke ahụ bụ ma e wezụga nke ahụ 5,5 anụ ọhịa ahụ 1080p 2.5D curved panel, Snapdragon 820 quad-core chip na Android Marshmallow 6.0, nwere igwefoto 16 megapixel n'azụ nwere ụda olu ọkụ abụọ, nchọpụta akpaaka na-elekwasị anya (PDAF), nyocha ihe onyonyo (OIS) na 8 megapixel n'ihu. igwefoto. Ekwentị na igwefoto ị ga-ahụ ezigbo nsonaazụ dịka ị nwere ike ịhụ ekele maka nkọwa ndị ahụ na nke ahụ, ọ bụ ezie na ọ nweghị ngwakọta abụọ ahụ na anyị ga-amalite ịhụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịhapụ anyị ịkọwapụta site na ogo nke ya foto.
Ọzọ nke nkọwa ya bụ ya akara mkpisiaka ihe mmetụta Na azụ na ị nwere ike unlock kpọghee ekwt ekwentị na 0,1 sekọnd. Anyị nwekwara ike ịza ajụjụ maka mgbawa ọdịyo AK4376 ya, Dolby Atmos na SmartPA amplifier maka ahụmịhe ọdịyo dị elu. Banyere ọdịdị ya anya, ọ nwere nhazi pụrụ iche na ngwongwo aluminom ma buru ibu 7,5 mm. Nhazi ahụ bụ ebe ha na-ejikwa ya kpọrọ ihe iji na-agbaso ihe na-eme taa yana ndị nwere ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya karịa afọ ole na ole gara aga maka ụdị a.
ZTE nubia Z11 nkọwa
5,5-anụ ọhịa (1920 x 1080) Full HD 2.5D ihuenyo na ozodimgba iko 3 nchebe
Qualcomm Snapdragon 820 64-bit quad-core 2.15 GHz 14nm mgbawa
4 GB Ram na 64GB nke nchekwa / 6GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa expandable site na micro SD ruo 200 GB
A gam akporo 6.0 Marshmallow na nubia UI 4.0
SIM abụọ (nano + nano / microSD)
Igwefoto azụ nke 16 MP nwere ụda ọkụ LED abụọ, ụda IMX298, OIS, PDAF, oghere F / 2.0, oghere 6P
8 MP n'ihu igwefoto, oghere 5P, oghere f / 2.4, akara ogo 80
Akụkụ: 151,8 x 72 x 7,50 mm
Arọ: gram 162
Jackmm ọdịyo 3,5mm, mgbawa AK4376, ọdịyo dolby
4G LTE na VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.1 GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
Batrị 3.000 mAh nwere Ndenye Nchapu 3.0
Zte nubia Z11 biara na ọla edo, isi awọ na ọla ọcha na ego ya dị na ọnụego mgbanwe na $ 376 maka ụdị 4GB RAM na 64 GB nke nchekwa. RAMdị RAM 6GB nke nwere 128GB nke nchekwa dị na ọla edo na-acha aja aja na ọnụahịa ya ruru dollar 527.
Ga-etinye na ire ere July 6 na ndebanye aha maka ndoputa amaliteworị. A ga - enwekwa obere ụdị nke Cristiano Ronaldo nwere agba ọla edo obsidian na mpempe akwụkwọ ya na azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » ZTE nubia Z11 mara ọkwa na 5,5 ″ 1080p ihuenyo, Snapdragon 820 mgbawa na 6GB nke RAM
Etu esi egbochi ngwa iji agụ akwụkwọ mkpịsị aka gị
[APK] can nwere ike ịnwale ngwa Grace UX, interface nke Samsung Galaxy Note 7